mairie-antananarivo – EPP Antanimena I (BoriboritanyVoalohany)
EPP Antanimena I (BoriboritanyVoalohany)
administrateur 13 aprily 2018 Commentaires fermés
Taorian’ny nandrombahan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra ny loka momba ny fambolena an-tanan-dehibe ny taona 2017 dia tsy nitsahatra hatrany ireo tompon’andraikitra nitady hevitra mba hampiroboroboana sy hampandrosoana izany sehatry izany.
Ho fampiarana izany, ny marainan’ny Zoma 13 Aprily 2018 dia nanatanteraka fambolena anana sy legioma tao amin’ny zaridainan’ny EPP Antanimena I ireo tompon’andraikitra avy ao amin’ny Boriboritany Voalohany. Vokatra maro no andrasana amin’izany toy ny salady, choux de chine : tisam sy pé-tsai ary voatabia. Tsiahivina fa afaka iray volana monja dia afaka mioty vokatra.
Ny tanjona amin’izao fambolena eny anivon’ny EPP izao dia mba ho fanampiana ireo mpianatra amin’ny sakafo hoaniny isaky ny atoandro izay omen’ny PAM (ProgrammeAlimentaire Mondial) sy ny MEN (Ministere de l’Education Nationale) maimaimpoana satria zary lasa voamaina hatrany ireo fanampiana ireo ka mila miovaova. Eo ihany koa ny fampianarana ireo ankizy mba ho tia sy hanaja ary hikolokolo ny tontolo iainana.
Fanombohana ihany izao rehetra izao fa mbola hitohy manerana ireo EPP 20 mandrakotra ny Boriboritany Voalohany.
Fanambarana avy amin’ny Ben’ny Tanàna Lalao RAVALOMANANA
Notokanana ny toeram-pitsaboana fototra CSB II etsy Antsahamamy
Fihofanana ho an’ny mpampiofana
Fanambaran’ny Filohan’ny Filankevitry ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra
Fampandrenesana lalana tapaka